Nahoana no zava-dehibe tokoa ny menaka amin'ny sakafon'ny alika? | Tontolo alika
Sakafo maro ho an'ny alika no tsy ampy tavy mahasalama hitazomana ny fahasalamany, izany dia mitranga matetika rehefa mitondra sakafo fihinana am-bifotsy na maina.
Ny fanontaniana apetratsika matetika amin'ny tenantsika dia nyFa maninona ny alika no mila sakafo ara-pahasalamana?? Ireo sakafo ireo dia manome loharanon-kery mifantoka amin'ny angovo ary mamorona sela manify, ankoatry ny tavy sasany tombontsoa manohitra ny inflammatoire ary manana anjara toerana lehibe amin'ny famoronana hormonina izy ireo.
1 Fa maninona ny alika no mila sakafo ara-pahasalamana?
2 Menaka samihafa amin'ny sakafon'ny alika
2.1 Menaka Krill
2.2 The Omegas 3
2.3 Menaka voanio
2.3.1 Ny menaka voanio dia mety tena mahasoa am-bava ary koa amin'ny fiainana lohahevitra.
2.4 Menaka voa
Fa maninona ny alika no mila sakafo ara-pahasalamana?
ny tavy mahasalama Tena ilain'izy ireo ihany koa ny biby mamokatra asidra bile izay afaka manampy handevona sy handraoka otrikaina, fomba mora hampitomboana tavy mahasalama amin'ny sakafon'ny alika dia ny fampidirana menaka mahasalama sy kalitao amin'ny sakafonao
Menaka samihafa amin'ny sakafon'ny alika
Menaka tena atoro anao dia menaka krill, manan-karena asidra matavy izy, omega-3, amin'ny asidra eicosapentaneoic ary amin'ny asidra deosahexaenoic ary na dia tavy miady amin'ny inflammatoire Matetika izy ireo dia hita ao anaty trondro, tsy dia ampiasaina firy amin'ny sakafo sakafon'ny trondro. Azonao atao ny mampiasa sakafo alika sardinina fonosana na azonao atao ny manome sakafo salmon trondro any an-tany hafa ho an'ny sarobidy Omega-3.
Azonao atao koa ny manandrana a famenony menaka krill. Fa tena zava-dehibe tokoa ny hamarinina ireo menaka an-dranomasina rehetra ampiasaina, tsy misy poizina ary fiaviany maharitra izy ireo.
Ohatrinona ny menaka krill ilainao ny biby fiompinao? Raha salama tsara ny biby fiompinao, tsara ny mampiasa menaka krill toy izao manaraka izao:
250 milligrams isan'andro ho an'ny karazany kely sy saka, 500 mg ho an'ny alika kely, 1000 milligrams ho an'ny alika antonony, 1500 ho an'ny alika lehibe, ary 2000 milligrams ho an'ny alika milanja 80 kilao na mihoatra.
The Omegas 3
ny omega3 Tena mora tohina amin'ny oxygène izy ireo ary afaka mandeha mangidihidy haingana, ka ny menaka apetraka mivantana ao anaty paompy na menaka amina kapsily dia azo vohaina handraraka ny sakafon'ny alika.
Safidy hafa izany mividy menaka ranon-tavoahangy, saingy tsy safidy tena soso-kevitra io, satria misy a ahiana mafy amin'ny okididra ary tsy maintsy mitandrina ianao amin'ny tavy omega 3 izay ampiana amin'ny sakafon'ny biby fiompy. ny tsy fahampiana omega 3 izy ireo no tsy fahampiana mahazatra indrindra misy ary ny soritr'aretina dia matetika mamaivay lava amin'ny alika sy aretin-koditra ary sofina.
Menaka atolotra iray hafa tokony hampiasaina dia kôkônina, satria zava-dehibe tokoa ny famahanana biby fiompy amin'ny ampahefatry ny sotrokely misy menaka voanio zato isan-jato, izay azo ampiana amin'ny fotoam-pisakafoanana, na sakafo an-trano na ara-barotra.
Menaka voanio dia loharanon'ny asidra laurika, karazana agents antimicrobial izay mahatonga ny menaka voanio ho safidy tsara ho an'ny biby fiompy izay misy otrikaretina holatra na mahazaka aretin-kozatra, io koa dia afaka manampy amin'ny olan'ny taovolo ary mety hampiasaina amin'ny fomba mahazatra ny hoditra.
Ny menaka voanio dia mety tena mahasoa am-bava ary koa amin'ny fiainana lohahevitra.
Ny karazana menaka farany atolotra dia ny Menaka rongony vita amin'ny hemp sy voatavo.
Raha ilaina hamenoana ny omega 6 matavy amin'ny sakafon'ny biby fiompinao dia aleon'ireto menaka ireto noho ny tombo-tsoa rehetra misy amin'ny menaka katsaka, menaka manitra na menaka oliva. Ny tsy fahampian'ny tavy omega 6 amin'ny sakafon'ny biby fiompinao dia mety hiteraka fivoarana tsy mahomby amin'ny ankapobeny sy tsy fahombiazan'ny lanjany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Menaka amin'ny sakafon'ny alika
Ahoana no tokony hiresahantsika amin'ny alika?